Qarax weyn oo ka dhacay koonfur bari ee Turkiga iyo qasaare lixaad leh oo qaraxaasi ka dhashay (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Qarax weyn oo ka dhacay koonfur bari ee Turkiga iyo qasaare lixaad leh oo qaraxaasi ka dhashay (SAWIRO)
Wararka naga soo gaaraya dalka Turkiga ayaa sheegaya in qarax aad u weyn uu ka dhacay magaalada Diyarbakir oo ku taala koonfur bari ee dalkaas, haalkaas oo la sheegay inay degan yihiin dadka kurdiyiinta ah.
Qaraxaasi oo sida la sheegay ahaa mid loo adeegsaday gaari walxaha qarxa lagu soo xiray islamarkaana lasoo dhigay agagaarka saldhig Boolis ah ayaa bur-bur aad u xoogan geystay.
Inta la xaqiijiyay waxaa qaraxaasi ku geeriyootay ilaa 5 qof, iyadoona sidoo kale ay ku dhaawacantay tiro ka badan 100 qof, waxaana dadka dhaawacmay qaarkood ay yihin kuwa dhaaawacyadooda ay aad u culus yihiin.
Qaraxa ayaa la sheegayaa inuu ka dhacay meel ku dhaw dhisme boolis, wuxuuna qaraxaan imaanayaa xilli ciidanka booliiska ee dalkaasi ay xireen hogaamiyihii xisbiga HDP ee kurdididu taageerto, kaas oo xildhibaano badan ku leh baarlamaanka dalka Turkiga.
Dadka waxyeeladda ugu badan kasoo gaartay qaraxaasi ayaa la sheegayaa inay u badan yihiin ciidamo boolis ah iyo sidoo kale dad rayid ah oo ka ag-dhawaa goobta uu qaraxa ka dhacay.
Goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa waxaa qariyay qiiq cad, waxaana qaraxaasi kadib la maqlay dhawaqa rasaas oo goobtaasi ka dhaceeysay.
Magaalada Diyabakir ayaa ah magaalada ugu weyn oo ay ku badan yihiin dadka kurdiyiinta ah oo ku taala koonfur bari Turkiga, waxaana laga yaaba in qasaaraha uu intaasi kasii bato.